> Resource > Lugood > Top 5 Lugood Widgets ka Yahoo
Ma doonaysaa in ka badan oo ka mid Lugood aad? Ma ogtahay Lugood aad noqon kartaa saacad ah alarm, saacad hurdo, music dukaan raadiyaha, mashiinka karaoke ah? By isticmaalaya widgets Yahoo , waxaad u tagi kartaa oo dhan ka mid ah in ay xaqiiqada ku daqiiqo. Ka sokow, Yahoo Widgets ( hore loo soo dajiyo ) keena oo dheeraad ah si aad Mac ama Windows desktop iyada oo in ka badan 4000 oo widgets. Halkan waa Yahoo naga soo xulay widgetsfor Lugood. Rajaynaynaa in ay caawin in aad si.
Lugood Alarm Clock
Hadda joojin cunnaha ee doqon ka saacad ka qaylo joogto ah, kaliya noqon Lugood aad galay saacad Alarm dhawaaqa by ciyaaro music aad ugu jeceshahay. Tusaale ahaan, la abuuro playlist ah oo lagu magacaabo "Alarm", oo ha Lugood aad ka samaysan waqti cayiman.
Lugood Hurdada Saacad
Tani widget Lugood ay la mid tahay mid la soo dhaafay, sidaas oo kale ayaa laga yaabaa in loo isticmaalo sida saacada hurdo gaaban by dejinta Lugood off in muddo ah. Waxaad sidoo kale yeelan karaan Lugood ciyaaro aad u seexdaan. Lugood widget Nice!
Lugood Bar qoreysa dhan qaab oo gacanta ku caadiga ah oo lagu daray suuqa kala gooni ah farshaxanka u Lugood cover album. Waxaa xitaa waxay bixisaa isdhexgalka la lyrics baadi Widgets.
Lugood Radio jeclaa
Sawirka. Waxaad Dhagayso raadiyaha Lugood iyo rabto in aad ogaato waxa heesta taasoo ay hadda la ciyaaro. Haddaba kanu widget Yahoo u Lugood - Lugood Radio jeclaa kuu sheegayaa dhamaan macluumaadka aad rabto - horyaalka music ah, qoraaga album, link si ay u soo iibsadaan Lugood dukaanka, iyo in ka badan. Tani waa widget jecel shakhsi ahaaneed ee Lugood.
Lugood Saaxiibkii widget si toos ah u baadhaa album cover farshaxanimada ka amazon.com iyo dejisan in your computer. Waxaa sidoo kale soo bandhigay lyrics si aad u heesi kartaa heesta ayaa haatan u ciyaara. Sida ay magaca muujinaysaa, waa dhow ah ayaa qalbiga Lugood Saaxiibkiis. Xataa waxaad soo bandhigi kartaa lyrics on iPod haddii lyrics waxaa gundhig in song ka hor kaga dayanayaan inay iPod. Isku day.
Sida loo rakib Lugood Widget ka Yahoo
Yahoo Widgets yihiin codsiga yar laakiin dabacsan ama madal si aad u wax walba si aad u Mac ama Windows desktop keeno. Haddii aad tahay barnaamijyada, waxaad xitaa laga yaabaa gaar ah widgets Lugood aad ka sahlan si aad u hesho qalab bilaabay. Laakiin dadka isticmaala guud ahaan, waxa aad u baahan tahay oo kaliya inaad kala soo baxdo widgets iyo rakibi sida caadiga ah codsiyada. Widgets ayaa ku jirta kaalinta in badan oo kala duwan, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn cimilada, maaliyadda, jadwalka taariikhda, baytari, ciyaarta, music, iyo iyo. Oo miyaan sheegin? Dhamaan lacag la'aan ah.
Si aad u rakibto widget Lugood, kaliya click double on file ka .widget soo bixi *. Haddii nidaamka jirtey in aysan jirin codsiga si aad u furto, xaq riix badhanka goob on dekedda Yahoo Widgets ka dooro Widget Open ... si ay u doortaan widget aad rabto in aad u bilowdo.